Shirkii madasha oo maalinkii 2aad kasocda Muqdisho iyo qodobo ay adagtahay in xal laga gaaro. – Radio Daljir
Shirkii madasha oo maalinkii 2aad kasocda Muqdisho iyo qodobo ay adagtahay in xal laga gaaro.
Diseembar 7, 2016 10:04 g 0
Muqdisho, Dec 08 2016-Shirkii madash-wadda-tashiga Qaran ee hogaamiyayaasha Soomaalida ayaa ka furmay magaalad muqdisho iyadoo ay Horyaalaan Qodobo si fudud aan xal loogu helikarin.
1) In La Cayimo waqtiga doorashada la soo afjarayo arinka oo ah mid aad u adag inta la xalinayo kuraasta laysku haysto.
2) Dhameystirka Hannaanka Doorashada Dadban Dedejinta Doorashada Aqalka Hoose Iyo Midda aqalka Sare .
labada Aqal kan sare iyo kan hoose waxay u baahan yihiin in la diyaariyo Dastuurkii ay ku shaqeen lahaayeen hadaan arinkan wax laga qaban sidey u wada shaqay lahaayeen ayaa adkaan doonta.
3)Xal Ka Gaarista Muranka Puntland iyo Gobollada Waqooyi ee Ku aadan aqalka sare
Qodobka waa mid adag oo u baahan in si Taxaderleh loogu heshiiyo Maadama waxa la isku hayo ay tahay fikir ku dhisan Qabiil .
Qodobka haweenku waa arrin ka hor imanaysa caqiidada diinta islamka iyo xoriyada dhaqanka ee bulshada soomaaliyeed markaa arinkan way adag tahay in la helo Qoondada Dumarka loo gooyey. oo la soo dhamaystiro.
5)Xallinta Kuraasta muranka ka jiro ee aqalka hoose way adag tahay in kuraas xoog iyo xoolo lagu helay in si fudud loo soo celiyaa maadama aaney jirin maxkamad dasruuri ah oo awood u leh inay ka qaado xilka xildhibaan Qofka xooga ama xoolaha siistay Xilka xildhibaan Qodobkana waa mid adag in xal laga gaaro inta la helayo hayadaha sharciga ku dhisan.
6)In doorashada madaxtinnimada lagu qabto 2016-ka Muqdisho gudaheeda. Suurta gal maaha in hawsha ee is Qab qabsiga ah . Inta la joojiyo in Doorasho la boobsiiyo arrinkaa waxaa ka dhalan-kara dhibaato baden oo ka weyn ta hada jirta, Waa in marka hore la saxaa qaladaadka dhacay, Si loo helo Doorasho wanaagsen
W/Q: . Maxamed caalim
Sawirro-Qaabkii ciidanka difaaca Puntland ula wareegeen degmada Qandala.